Madheshvani : The voice of Madhesh - विकासमा ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन : निरसल साह
विकासमा ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन : निरसल साह
मेयर, मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही
मलंगवा नगरपालिका पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि २५ कि.मि. दक्षिण अवस्थित सबै जातजातिको बसोबास भएको र ३०.४४ वर्ग कि. मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको तथा करिब ८ हजार २० घरधुरी तथा ४६ हजार ५१६ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिका सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम प्रदेश न. २ को मध्य भागमा रहेको छ । अधिकांश भूमि समथर रहेको यो नगरपालिकामा वर्षातको पानी जम्ने समस्या रहेको छ । भारतको बिहार राज्य सीतामढी जिल्ला अन्तरगत सोनबर्षा जाने मुख्य प्रवेशद्वार यसै नगरपालिकामा पर्दछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।०१२५ को निर्णयबाट गठन भएको यस नगरपालिकामा मिति २०७३।११।२७ को निर्णयानुसार साविक, गम्हरिया, खुटौना र भांडसर गा.बि.स. समेत समावेश गरि क्षेत्र विस्तार भएको हो ।
० मलंगवा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि के के कामहरू गर्नुभयो त ?
— हामीले गत वर्षको बजेटबाट ७५ प्रतिशत सडक तथा बाटोघाटोमा लगाएका थियौं र २५ प्रतिशत बजेट अन्य सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका छौं । हामी निर्वाचित भएलगत्तै मलंगवा नगरपालिकामा स्मार्टसिटीको योजना परेको थियो । यस नगरपालिकाको ४०÷४२ सडकहरूमा स्मार्टसिटी योजनाअन्तर्गत कार्य चलिरहेको छ । यस्तै, अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हाम्रा योजनाहरू तीव्र गतिमा चलिरहेको छ ।
० यस नगरपालिकामा केकस्ता समस्याहरू छन् ?
— यस नगरपालिकामा मापदण्डसम्बन्धी धेरै समस्या थियो । नयाँ संरचना र सडकहरू विस्तार गर्दा समस्याहरू आएका छन् । सडक सञ्जाल विस्तार हुँदा जनतालाई अलिअलि पीडा त अवश्य भएको छ । स्मार्टसिटी योजनाअन्तर्गत सडक विस्तार गर्दा धेरैको घरहरू भत्काउँदा थुप्रै मुद्दाहरू नगरपालिकामाथि परेको छ । तर, विस्तारै सुधार गर्दै मापदण्ड स्पष्ट पारेर कामहरू अगाडि बढिरहेको छ । समस्याहरू आउँछन् तर हामीले सहजीकरण गर्दै काम गरिरहेका छौं ।
० स्मार्टसिटी योजनाअन्तर्गत केकस्ता कार्यक्रमहरू छन् ?
— स्मार्टसिटी योजनाअन्तर्गत २० किलोमिटर नाला र पिच सडक छ । १५ करोडको लागतमा निर्माण हुने बस स्ट्यान्ड र भवन निर्माण, ढलान, शौचालय निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरू छन् । यस क्षेत्रको विकास गर्न दुई वटा पोखरी बनाउन १० करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
० पर्यटनका सम्भावनाहरू के–के छन् ?
— यहाँ सबभन्दा ठूलो पर्यटनको सम्भावना रहेको १२ बिघामा बौधी माताको पोखरी रहेको छ । त्यहाँ भोला बाबा र माता पार्वतीको मन्दिर पनि छ । त्यहाँ बजार लगाउने टहरा पनि छन् । हामीले त्यसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्यौं भने पर्यटनको रूपमा विकास हुनसक्छ । त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि योजनाहरू बनाउँदैछौं ।
० तपाइँहरूको कामबाट मलंगवा नगरपालिका जनता कतिको खुशी छन् त ?
— यहाँका जनता एकदम खुशी छन् । हामीले जनतालाई भनिरहेका छौं कि विकास निर्माणको मामिलामा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नगर्नुस् । हामीले जुन कार्यका लागि जति बजेट छुट्याएका छौं त्यो एकदम पारदर्शी छ, त्यसमा कुनै कमीकमजोरी भयो भने हामीलाई भन्नुस् । त्यहीं अनुसार जनताको सल्लाह र सुझावअनुसार प्रत्येक वार्डहरूमा काम भइरहेको छ ।
० तपाइँहरूले निर्वाचनका बेला केकस्ता नाराहरू दिनुभएको थियो ?
— हामीले निर्वाचनका बेला सबभन्दा ठूलो समस्या थियो बाटोघाटोको, त्यसमा सबभन्दा बढी बजेट दिएका छौं । त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका आधारभूत विषयमा सुधार ल्याउने लगायतका वाचाहरू गरेका थियौं । पहिला यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन अवस्था थियो, त्यसमा अहिले लाखौं गुणा सुधार भएको छ । यहाँ शिक्षाको पनि एकदम दयनीय अवस्था थियो, त्यसमा पनि हामीले सुधार गरेका छौं । हामीले निर्वाचनका जुन प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौं त्यहीं अनुसार काम अगाडि बढाएका छौं ।
० भनेपछि मलंगवा नगरपालिकाका जनताले स्थानीय सरकारको महसुस गरेका छन् ?
— एकदमै गरेका छन् । तपाइँहरूले पनि यहाँ आएर अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । वर्षौंदेखि यहाँ स्थानीय प्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा निश्चितरूपमा जनताका आवश्यक्ता र आकांक्षा धेरै छन् तर पनि हामीले ती सबै कुरा पूरा गर्न लागि परेका छौं । त्यसैले जनता पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छन् भनेर भन्दिँन तर हामीले जुन किसिमले काम गरिरहेका छौं त्यसबाट जनता सन्तुष्ट नै छन् ।
० स्थानीय निर्वाचनपश्चात् जसरी सिंहदरबार गाउँगाउँमा भनिन्थ्यो, यो लागू भएको छ ?
— नेपालमा अहिले तीन तहको सरकार कायम भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आआफ्नो काम गरिरहेको छ । तर सबभन्दा बढी नजिकको सरकार स्थानीय नै भएकोले त्यसको अनुभव गर्न पाएका छन् । हामीले जनतामा स्थानीय सरकारको उपस्थिति महसुस गराएका छौं । अहिले पनि हामीले प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने कतिपय कानूनहरू पाउन सकेका छैनौं । कतिपय कानूनहरू प्रदेश र संघीय सरकारबाट हामीले पाउन सकेका छैनौं । जसकारण प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारप्रति गुनासो गरिरहेका छन् । तर, आंशिक रूपमा हामीले भ्याएसम्म यहाँका जनताले सिंहदरबार गाउँगाउँमा महसुस नगरेपनि हामी प्रयासरत् छौं ।
० संघीय सरकारको मातहतमा रहेको तराई/मधेश समृद्धि कार्यक्रमका योजनाहरू मलंगवा नगरपालिकामा आएको छ कि छैन ?
— यो कार्यक्रम अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा आएको छैन । यसका दायरा के–के हो, यसभित्र केकस्ता कार्यक्रमहरू छन् भन्ने मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । मैले पनि सुनेको मात्रै छु कि यस्ता कार्यक्रमहरू छन् तर यहाँ लागू भएको अवस्था छैन ।